Hidhaa fi Ajjeechaa Oromoo Eeenyutu Dhaabuu Danda’a? – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooHidhaa fi Ajjeechaa Oromoo Eeenyutu Dhaabuu Danda’a?
Hidhaa fi Ajjeechaa Oromoo Eeenyutu Dhaabuu Danda’a?
Damee Boruu: 10/27/2020
Guyyaa 06/14/2020 mata duree “Ajjeechaan Oromoo Dhaabbachuu Qaba” jedhee waa’ee hammeenya Uummata Oromoo irratti bara sana raawwatamaa jiru barreesseen ture. Bara sana OPDOn haadha mana TPLF waan turteef hidhaa fi ajjeechaa Uummata Oromoo irra gahaa jiruu itti gaafatama duraa kan qabuu OPDO fi TPLF turan. Walii gala immoo itti gaafatama guddaa kan qabu Mootummaa EPRDF jedhee kan of waamu akka ture waliif galla.
Waggaa lama dura qee’ee isaa irraa buqqa’uun, adamsamuun, hidhamuun, gidirfamuu fi ajjeefamuu irra darbee qabeenya isaa saamamuun daangaa waan darbeef Uummtni Oromoo irree tokkichaan ka’ee diina kana akka of irraa buqqisuu waamcha gochuun dirqama ture. Hara’a garuu Wayaaneen waraana ishee OPDO itti dhiiftee gara naannoo ishee deemuun of ijaaraa jirti. Waraanni Wayyaannee akka jirutti hafee ajjeechaa Uummata Oromoo itti jabeessaa jira.
Waraanni wagga lama dura uummata keenya fixaa ture har’a ajjechaa dugugaa sayni Oromoo raawwachuu hin dhaabne. Uummatni keenya yaroo itti afuura baafachuuf ayyaana argate hin jiru. Waraanni Raayyaa Ittisa Biyyaa jedhamaa ture har’a hojiin isaa inni duraa dubartii fi dhaa’ima Ooromoo ajjeessuu tahee jira. Shiftaa dubartii gudeeduu fi qabeenya uummata saamu ifati argaa jirra. Biyya lafaa irratti RIB kan dhaagaa biyyaa eeguu fi kan uummata tajaajjilu malee saree tahee mandara keessa deemee kan hojii gadadoo hojjechuu qabu miti.
Waan namoota gadadoo tahan irraa ajaja fudhatuuf hojii gadado hojjetee maqaa isaa balleessuun silaa irraa eegamuu hin qabu ture. Dhalootni har’a jiran humna RIB jedhamu kanaaaf kabajaa tokko qabaachuu hin danda’an. RIB jedhee kan of waamu kun uummata saamaa, salphisaa fi ajjeessaa guyyaa guyyaan of saaxilaa jira. Warri kun seera mirga namumaa waan cabsaniif (crime against humanity) seera biyyaa fi biyya lafaa duratti yaroo isaan dhiyaatan fagoo hin jiru. Gaafa sana ajaja namaa fudhadheen dubartii fi daa’ima ajjeese, dubrtii gudeede, qabeenya uummata same jedhanii waakkachuun bakka hin qabu. Warri farra uummataa tahan yaroo badii kana fakkaatu hojjetan warri biyyaa fi uummataaf garaan isaanii laafu maaliif taa’anii akka ilaalan namaaf hin galu. Warra maqaa isaanii cilaatii dibee uummata wajjin garaa fi dugda isaan godhu of keessaa baasanii maaliif hin darban?
Bara kana OPDOn warra yaada Oromummaa qaban of keessaa haxxoofte baaftee warra nafxanyootaatti heerumtee jirti. Abbaan manaa ishee haaran kun immoo Afaan oromoo fi waan Oromoo jedhu dhaga’uu hin fedhu. Ishuma iyyuu akka maqaa jijjiratuuf gidiraa agrsiisaa jira. Waggaa lama keessatti maqaa yaroo lama baafattee jirti. Inni lammaffaa kun isa dhumaa tahuu isaa illee waan beeknu hin qabnu. Garuu maqaa Oromummaa isa qabu waan of irraa haqtee jirtuuf xiqqoo wajjin jiraachuun ni mala. OPDOn nafxanyoota wajjin hafte kun diqaaloota Habashaa warra haadha ishee jalatti olii fi gad gagalagalanii buluu barte dha.
TPLF Oromoon waan bilisummaa qabu fakkeessite saamuu fi harka wayyaa jalaan OPDO yaabbatee Uummata Oromoo bituu ture kaayyoon ishee. Na gahe gaafa jedhe Uummatni Oromoo gatitti isaa irraa kaasee darbeera. Abbaa manaa OPDO isa haaraaf akka TPLF Uummata Oromoo saammuu fi bituun gahaa miti. Kaayyoon ilmaan nafxanyaa sanyii Uummata Oromoo duguganii lafa irraa balleessanii lafa isaa fi qabeenya isa dhunfachuu dha. Akeeka kana bakkaan gahuuf tarsiimoo fi tooftaa itti baasatanii halkanii fi guyyaa irratti hojjechaa jiru. Biyya keessaa fi alaa qabeenya Uummata Oromoo bara dheeraaf saammatnii tulatanii jiraniin deebisanii Uummata Oromoo balleessuuf hojjechaa jiru.
OPDOn ilmaan nafxanyoota wajjin hafte kun garaan ishee yoo guute waan biraa waan barbaadu hin qabdu. Lafaa fi mana TPLF dhiiftee baqate OPDOn dacha dachaan saamaa jirti.Yaroof hundi isaanii akka qabeenya milliyoonaan hortan odeefamaaf jira. Garuu waan baayye dagatanitu jira. Warri nafxanyoota kun Uummata Oromoo dura ishee fixxuuf akka deeman argaa hin jirtu. Guyyaa isaanitti tolu eegachaaf jiru.
Uuummata Oromoo adda duran kan fixxaa jiru warra sirna nafxanaa leelisuu fi warra nu wajjin jiratu akka tahe adda baafnee hubachuu qabna. Diqaallonni Habashaa basaasa, dabballee fi kabinee PP uummata keenya keessa facaaftee jirti. Kan Qeerroo fi Qarree Oromoo ajjeesiisa jiru warra kana. Kan Abbaa Gadaa, Sheekotaa fi Qeesota Oromoo filatee tilmaaman karaa qinda’een fo’ee kan akka ajjeefaman murteessu warra kana. Poolisiin, RIB fi humni kamuu Naqamte, Arsii, Balee, Harari, Jidduu Galeessa Oromiyaa, Gujii, Borna, Matakel, Walloo dhaqee nama tokko adda baasee ajjeessu danda’u hin jiru. Kan ijoollee keenya ajjeesisaa jiru nu ollaa jira. Amma warra kana adda baafnee garaa jabinaan of keessaa qulqulleessinu ajjeechaan ajaa’ibaa nu irraa hin dhaabbatu.
Gaaffii ajjeechaa Uummata Oromoo eenyutu dhaabbu qaba jedhuuf deebiin isaa Uummata Oromoo qofa. Kana booda gareen amma aangoo irra jiru yaroon mootummaa isaa waan raawatee jiruuuf yoo nama hidhee fi ajjeesse malee jiraachuu hin dnada’u. Kanaaf jecha yaroo kana hidhaa fi ajjeechaa uummata keenya irraa haa dhaabbatu jennee gaaffachuun dhageetii hin qabu. Akka odeefamu yoo tahe warra saboontota qoratuu fi warra deemnii ajjeesan (killing squad) qindaa’anii ijaaramanii jiru jedhama. Haalli deemaa jirus oduu kana waan dhugaa qabu fakkeessa. Ajjeechaan wal fakkaatuu Oromiyaa guutuu keessatti guyyaa guyyaan babal’achaa jira.
Hidhaa fi ajjechaa kana dhaabbuuf Uummatni Oromoo akka nama tokkotti ka’ee fincila xumura garbummaa gochuu qaba. Meeshaa qabu fudhate yaroo tokko itti xiqqaa fi guddaan bahee humna waraana bifa kaamiin iyyuu magaala isaa keessa qubatee jiru buqqisee ari’uu qaba. Yoo namni shan qofa hiriira bahe nama shan ajjeessuun salphaa dha. Yoo namni Kudha shan bahe kudhan hidhanii shan ajjeessuun rakkisaa miti. Yoo namni kuma shantama bahee eenyutu akka lubbuu isaaf sodaatee baqatu ilaalla. Meeshaa dhiisee yoo dhakaa qabatee itti uummatni itti marse jala hin dhaabbattu. Garaa isheef achi jirti malee kaayyoo duutuuf hin qabdu.
Waraana kana wagga lama dura Qeerroo fi Qarreen Oromootu dhagaa qofaan biyyaa baase. Har’a Uummatni Oromoo utuu WBO of biraa qabu akkas salpachuu hin qabu. Yoo du’a kan sodaannu tahe duuti nuuf hin oolu. Akkaataa itti duunutu adda taha malee. Seenaa hojjetanii haqa uummata ofiif du’uun bara baraan yaadatamaa jiraachuu dha.
Gadaan Gadaa Xumara Grbummaa TI!
RSWO: Gudeeddaa fi Ajjeechaa Haadha Oromoo Ulfa
Gudeeddaa fi Ajjeechaa Haadha Oromoo Ulfa irratti Magaalaa Danbii Dolloo keessatti Raawwatame | RSWO Gudeeddaa…
Hidhaa fi Ajjeechaan Ummata Oromoo Irraa Haa Dhaabbatu!
Hidhaa fi Ajjeechaan Ummata Oromoo Irraa Haa Dhaabbatu! (Ibsa: Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Mudde 24, 2018)…
OLF is the eternal symbol of peace and justice
Preventing Ethiopia’s descent into a failed state